Iipilisi zokuNciphisa ukutyeba kwesisindo: I-7 ephezulu yokutya okuSebenzayo kwe-2021 - Impilo
Eyona Impilo Ezona pilisi ziLungileyo zokuThoba umzimba kunye nezongezo zokutya ezisebenzayo
Ezona pilisi ziLungileyo zokuThoba umzimba kunye nezongezo zokutya ezisebenzayo
Xa kuziwa ekunciphiseni ubunzima, akukho kunqongophala kweepilisi zokunciphisa umzimba kunye nezongezo zokutya onokukhetha kuzo. Ukusuka kwizitshisi ezinamafutha kunye nokutya okucinezelayo kwiipilisi zokutya, ukhetho alunamda.
Ezona pilisi zokuphulukana nobunzima ziqulathe izithako eziqinisekisiweyo ezinokukunceda ukonyuse imetabolism yakho, utshise amanqatha, unciphise ukuthanda indlala, kwaye wandise amandla.
Nangona kunjalo, ayizizo zonke izongezo zokulahleka kobunzima ezenziwe ngokulinganayo. Ngelixa ezinye iipilisi zokutya zisebenza kakhulu ekunciphiseni ubunzima, ezinye azinayo idosi efanelekileyo okanye indibaniselwano efanelekileyo yezithako ukuze zisebenze njengoko zibanga.
Ukukunceda ufumane ezona zisongezo zilahlekileyo, siye sajonga iipilisi zokutya eziphezulu kwintengiso kwaye sizilinganise kwizinto ezahlukeneyo ezinje ngezithako, idosi, uphononongo, ixabiso kunye nesiqinisekiso.
Ukuba ulungele ekugqibeleni ukunciphisa umzimba kwaye uzive unentembelo ngakumbi kunangaphambili, nazi iipilisi zokulahleka kwesisindo ezi-7 eziqinisekisiweyo zokusebenza.
Iipilisi ezi-7 eziphezulu zokulahleka kwesisindo ngo-2021
Ukuncipha : Eyona ilungileyo kubafazi
PhenQ : Eyona ilungileyo yokuphulukana ne-LB ezingama-30
Unkqonkqoza kwangoko : Eyona ilungele amadoda
Tshisa iLebhu Pro : Isitshisi esinamafutha ashushu kakhulu
NONE : Eyona nto iphambili ekunciphiseni ukutya
Inkulumbuso : Eyona ilungele ukwakha umzimba
KetoCharge : Eyona pilisi yokutya iketo
I-1) Iimbotyi zeLebhanon: Ezona pilisi zintle zokutya kwabafazi
I-LeanBean lolona khetho lwethu luphezulu ngeyona pilisi yokulahleka kwesisindo yabasetyhini. Le pilisi yokulahleka kobunzima inamandla isebenzisa zonke izithako zendalo ukukunceda utshise amanqatha anenkani, ukhabe isitetabolism, kwaye ucinezele ukutya kwakho. I-LeanBean iye yahlaziya ngokutsha amawakawaka amabhinqa kwihlabathi liphela, kubandakanya iimodeli ezininzi ze-instagram kunye nabaphembeleli abafunga ngokusebenza kwayo.
Nantsi indlela esebenza ngayo iLeanBean:
Ukuthintela iminqweno - Esinye sezona zinto ziphambili ngaphakathi kwifomula yeLeanBean sisithintelo sokutya ekuthiwa yiGlucomannan. Le fayibha inyibilikayo ikwenza uzive ugcwele phakathi kokutya, ekuvumela ukuba unciphise ukutya ikhalori kwaye utshise amanqatha ngokulula.
Ukunyusa iMetabolism -I-LeanBean isebenzisa umxube okhuselekileyo we-thermogenics yendalo kunye neeminerals ukonyusa imetabolism yomzimba wakho. Ngokwandisa izinga lokunciphisa umzimba, umzimba wakho uya kuwasebenzisa amanqatha omzimba wakho rhoqo njengomthombo wamafutha.
Ukunyusa amandla kunye nokuGxila -I-LeanBean ibandakanya ubunzima bevithamini ukunceda ukukhusela ukusilela kwezondlo, ngelixa ikwabonelela ngombane ococekileyo.
Ifomula yeLeanBean inezithako ezili-11 kubandakanya:
IKonjac Fibre (iGlucomannan)
Iivithamini B6, B12
Umthamo ocetyiswayo weLeanBean zii-capsule ezi-2, kathathu ngemini. Iziphumo ezingcono, kuyacetyiswa ukuba usele iglasi yamanzi ngomsebenzi ngamnye.
I-LeanBean yenye yeepilisi ezimbalwa zokungqinisisa ukwehla kobunzima kwimarike eyilelwe ngokukodwa umzimba wabasetyhini. Xa kuthelekiswa nezinye izongezo zokutya, iLeanBean iphantsi kakhulu kwizikhuthazi kwaye ayinayo nayiphi na icaffeine emsulwa kuyo.
Ukuba ungumfazi okhangela ipilisi yokulahleka kwesisindo efumana iziphumo, iLeanBean lukhetho olukhulu lokucinga. Ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-90, awunakuphulukana nantoni ngokuzama.
Ipilisi yokunciphisa umzimba eyilelwe ngokukodwa umzimba wabasetyhini
Nciphisa ukutya, utshise amanqatha, kwaye unciphise ukudinwa
Kubandakanya i-11 yonke-yendalo izithako ezikhuselekileyo kwaye ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga
Ukubonelela ngombane ococekileyo ngaphandle kwethamo elinzima lezinto ezikhuthazayo
Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-90
Cofa apha ukuze ufumane amaxabiso asezantsi kwiLeanBean
2) PhenQ: Top Ukalwe Weight Loss Supplement
PhenQ na ipilisi ilahleko ubunzima olusebenzayo ethembisa ukukunceda ukunciphisa umzimba kwii-angles ezininzi, kukunceda ufikelele kwiinjongo zakho ngokukhawuleza kunezinye iimveliso. Esi songezelelo sokutya sisetyenzisiwe ngabathengi abangaphezu kwe-190,000 abavela kwihlabathi liphela, kwaye uphononongo alukhange lube yinto entle.
Nantsi indlela PhenQ kunokukunceda ukunciphisa umzimba:
Ukutsha kwamafutha omzimba anenkani amelana nokutya kunye nokuzilolonga.
Ukunciphisa ukutya kwakho, okukhokelela ekunciphiseni ukutya kwekhalori kunye nokulahleka kwamafutha.
Ukuthintela ukuveliswa kwamafutha, kunceda ukuthintela ukutyeba.
Iphucula amanqanaba emood kunye namandla, ukuze ukwazi ukujongana nayo nayiphi na into eyiphosayo.
Ifomula ekumgangatho ophezulu ngaphakathi kwePhenQ iveliswa eUnited States nase-UK kwizibonelelo ezivunyiweyo ze-GMP kunye ne-FDA. Nazi izithako ngaphakathi kwesi songezelelo sokutya:
Capsimax Powder -Isitshisi esinamafutha esishushu esinceda ukuba unciphise kwaye uyeke ukwakheka kweeseli ezintsha zamafutha.
IChromium Ifunyenwe -Iminerali ebalulekileyo enceda ukunqanda iswekile kunye nokunqwenela i-carb, eyenza kube lula ukunciphisa umzimba.
Icaffeine -Yenza inkqubo yokutsha kwamafutha ngokusebenzisa i-thermogenesis. Inika amandla, ukugxila, kunye nenkuthazo oyifunayo ukuze ube namandla ngalo lonke usuku lwakho.
Nopal -Ukunciphisa ukutya kukutya okutyebileyo kwiiamino acid. Inceda ukunciphisa ubunzima obongezelelekileyo obangelwa kukugcina ulwelo.
I-L-Carnitine Fumarate -I-amino acid enceda ukuguqula amanqatha omzimba abe ngumthombo wamandla. Inceda ukulwa nokudinwa kunye nokudinwa ngelixa utya.
Ukubuyekezwa ubunzima pilisi ngenxa PhenQ ziye intle kakhulu. Abanye abasebenzisi baxela ukuphulukana nobuninzi beepawundi ezili-10 kwinyanga yokuqala yokusebenzisa le mveliso. Inokuphononongwa ngokutsha kwamadoda nabasetyhini ngokufanayo, kwaye kubonakala ngathi isebenza ngokukhawuleza kuninzi lweepilisi zokutya kwintengiso.
PhenQ ugqibelele ukuba amadoda okanye abafazi abafuna ukuba balahlekelwe ngaphezulu kweekhilogram nje ezimbalwa ubunzima bomzimba. Ukuba ufuna ukunciphisa ngaphezu kweekhilogram ezingama-30 kwaye ufuna ipilisi ilahleko olusebenzayo ukuze ufumane khona, PhenQ yeyakho. Ungazama ukuba kungabikho mngcipheko kwiintsuku ezingama-67, ukuze uthenge ngokuzithemba.
Ixhasa imetabolism yamafutha eqhelekileyo ukukunceda utshise iikhalori ezingaphezulu
Fumana iibhotile ezi-2 zasimahla ukuba uthenga ubonelelo lwenyanga ezi-3
Iziphumo eziSebenzayo zokuPhulukana noMzimba kwiiAngile ezininzi
Yenziwe kwi-100% yemifuno yemifuno kunye nezithako zeVegan
Isiqinisekiso sokuBuya kweMali sama-67
Cofa apha ukufumana amaxabiso asezantsi kwi PhenQ
3) Ukunkqonkqoza kwangoko: Iipilisi zokunciphisa umzimba ezona zibalaseleyo emadodeni
Unkqonkqoza kwangoko sisongezo esinciphileyo sokulahleka kobunzima esenzelwe amadoda. I-Knockout ekhawulezileyo sisongezelelo sokulahleka kobunzima esaphuhliswa ekuqaleni ukunceda amanqindi kunye nabaphumi-mandla be-MMA batshisa amanqatha kwaye babethwe phambi komlo ozayo. I-Knockout yangoku ngoku iyafumaneka kuluntu ngokubanzi kwaye ifumana uphononongo olukhulu kumadoda kwihlabathi liphela.
I-Knockout kwangoko isebenza ngokusebenzisa ukubetha okunzima, indlela ene-3 yokunciphisa umzimba. Nantsi indlela esebenza ngayo:
Yandisa iMetabolism yomzimba wakho -I-Knockout ekhawulezileyo isebenzisa i-thermogenics yendalo ukunceda umzimba wakho utshise amanqatha kwinqanaba eliphezulu, nokuba uphumla.
Ukunciphisa ukulamba -I-Knockout ekhawulezileyo isebenzisa ukutya okucinezelayo okunje ngeGlucomannan ukunceda ukunciphisa inkanuko yendlala, okwenza kube lula ukunamathela kuyo nayiphi na inkqubo yokutya. IGlucomannan ikwenza uzive ugcwele phakathi kokutya, ukunciphisa inani lokutya okunamafutha okutyayo.
Ukunyusa amaNqanaba oMbane -Uknockout kwangoko usebenzisa amandla okunyusa amandla okonyusa amandla kunye nokugxila, ekuvumela ukuba usebenze ngamandla okusebenza kwakho ngokulula kunangaphambili.
I-Knockout yangoku nje isebenzisa zonke izinto zendalo ezingakhuselekanga kuphela, kodwa ziyasebenza. Le mveliso ayiqulathanga zigcwaliso zitshiphu kwaye zonke izithako zayo zifakwe kumanqanaba afanelekileyo kwiziphumo eziphezulu.
Nazi izithako ngaphakathi kweNkqonkqo yangoku:
Kucatshulwe iti eluhlaza
Imbewu yeCayenne Pepper
Ibhotile enye ye-Instant Knockout iqulethe iicapsule eziyi-120, ezoneleyo ukubonelela ngeentsuku ezingama-30. Ukufumana iziphumo ezilungileyo, kuyacetyiswa ukuba uthathe le pilisi yokulahleka kobunzima amaxesha ama-4 ngosuku. Ngokuthatha amathamo amane ahlukeneyo, umzimba wakho uya kukwazi ukutshisa amanqatha ixesha elide kunokuba ubusebenzisa zonke iipilisi ezine ngokusebenza kube kanye.
I-Knockout ye-Instant yipilisi yokutya efanelekileyo yamadoda afuna isongezelelo esinamandla sokutshisa amanqatha atshisa amanqatha esisu, anciphise iminqweno, kwaye andise amanqanaba amandla. Kuba iqulethe amandla okunyusa amandla, lukhetho olukhulu emadodeni aphila ubomi obusebenzayo kwaye afuna umda owongezelelweyo kwindawo yokuzivocavoca. Iziphumo ezimangalisayo ngaphandle kwepilisi yokunciphisa ubunzima bomyalelo
Enye yezona zixhobo zokulahleka kwesisindo kumadoda
Yandisa ukutshiswa okunokubakho ngokunyusa imetabolism
Izithako zokucheba eziyi-100% zendalo
Tshisa iikhalori ezininzi ngexesha lokusebenza okanye ngelixa uphumle
Isiqinisekiso sokubuyela imali
Cofa apha ukuze ufumane amaxabiso asezantsi kwiNkqonkqo yangoko
4) Ukutshisa iLebhu Pro: Esona shushu seFermogenic Fat Burner
Tshisa iLebhu Pro ®lukhetho lwethu lokutshisa i-thermogenic fat burner. I-unisex kunye nefomula yendalo iphela eyilelweyo yokwandisa amanqanaba apheleleyo okulahleka kwamanqatha kunye nokuzuza kwezihlunu. Ukunceda zonke iintlobo zabantu bafezekise iinjongo zomzimba wabo ngokukhawuleza, ngendlela elula nekhuselekileyo.
Masijongane nayo, ukunciphisa umzimba kunzima.
Ukutya ukutya kuhlala kusondla. Ukusebenza ngumsebenzi onzima - ngakumbi xa uzama ukunciphisa iikhalori.
Ngoko nantoni na eyenza izinto ezilula zibe zilungile kufuneka zilungile, kunene?
Kwaye yile nto kanye Tshisa iLebhu Pro® yenzelwe.
Blaze ngokusebenzisa iikhalori ngexesha lokuzilolonga NOKUPHUMULA.
Gcina ubunzima bemisipha xa usika iikhalori.
Nyibilikisa amanqatha omzimba anenkani oko kutya kunye nokuzilolonga kuphela akuyi kuchukumisa.
Inqaku elikhulu lokudibanisa iBurn Lab Pro® yifomula efanelekileyo yomzimba. Yenzelwe ngokukodwa ukukhusela kunye nokugcina izihlunu ezibhityileyo ngexesha lokusilela kweekhalori.
Ukwenza ukuba ilungele abo bafuna ukuthatha ukwakheka komzimba ukuya kwinqanaba elilandelayo. Okanye iimbaleki zifuna ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza-ngaphandle kokunciphisa amandla kunye nokunyamezela.
Kungenxa yoko le nto iye yaba sisixhobo sokusika iimbaleki ze-MMA eziphezulu-kubandakanya iMbaleki yeBantamweight yeHlabathi, Aljamain Sterling.
IBurn Lab Pro® iyi-100% yendalo, ikhuselekile kwaye ayinasimahla. Isitya esenziwe ngabom sezinto ezi-5 ezixhaswe ngophando. Kwiifom eziphambili kunye needosi zeklinikhi. Ngendlela efanelekileyo yecapsule.
Uluhlu olupheleleyo lwezithako:
HMB -Ukonyusa amandla okutsha okunokutsha kunye nokwenza ngcono ukwakhiwa kwezihlunu, ukubuyisa kunye nokukhula.
I-Forslean®-ibonakalisiwe kuvavanyo lomntu ukunceda ukusika amafutha kunye nokwakha izihlunu.
I-Capsimax® -yenzuzo yokulahleka okunje ngamanqatha ngaphandle kwejitters.
I-GTF Chromium-ukuzinzisa amandla kunye nolawulo lokutya.
I-Bioperine® Black Pepper Extract - yokutshisa iikhalori kunye nokufakwa kwezondlo.
Kwaye iifomsile zilungile kuwe. Yenziwe kwifayibha yendalo ye-prebiotic yokufunxa okuphezulu kunye nokwetyisa okulula.
Kwaye uya kufumana iintsuku ezingama-30 ezigcweleyo zokubeka kuvavanyo olukhuselwe sisiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
Ke ukuba ujonge ukuthatha umzimba wakho kwiindawo zokutya kunye nokuzilolonga akunakufikelela. Okanye usike iikhalori kwaye ungafuni ukuphulukana nobunzima bemisipha. Ulufumene uphawu lwakho.
Cofa apha ukuze ufumane amaxabiso aphantsi kwiBurn Lab Pro
I-5) iTrimTone: Eyona nto isebenzayo yokuTya ukutya
I-TrimTone yipilisi yokutya yendalo kubafazi eyilelwe ukutshisa amanqatha, ukunciphisa ukutya, kunye nokunyusa imetabolism. Elona candelo lilungileyo malunga neTrimTone isebenzisa i-100% yezithako zendalo, oko kuthetha ukuba akukho myalelo ufunekayo.
I-TrimTone isebenza ngokukhuthaza i-thermogenesis ngaphakathi komzimba wakho, ukuguqula amanqatha agciniweyo abe ngamandla. Uguqula umzimba wakho ngokoqobo ube ngumatshini ovuthayo, ukuvumela ukuba utshise iikhalori naxa uphumla. Ngokutshisa ngamafutha omzimba anenkani iiyure ezingama-24 ngosuku, uya kuba nakho ukufikelela kwiinjongo zakho zokulahleka kobunzima ngokukhawuleza kunangaphambili.
I-TrimTone ikwanceda ekunqandeni iminqweno enomdla wokunciphisa izithako. Ngokulawula okungcono kwiminqweno yakho, uya kuba nakho ukunqanda iikhalori ezingafunekiyo ezinqeni ezinqeni.
I-TrimTone iyazingca ngokusebenzisa kuphela izithako ezikumgangatho ophezulu, ngaphandle kwezizalisi kunye nezithako ezingafunekiyo ongakwaziyo ukuzichaza. Nalu uluhlu olupheleleyo lwezithako ezisebenzayo ngaphakathi kweTrimTone:
I-Caffeine (100mg) -Inceda ukutshisa amanqatha nge-thermogenesis kunye ne-lipolysis.
Iibhontshisi zekofu eluhlaza - Yehlisa amanqanaba e-insulin, iphucula imetabolism, kwaye itshise amanqatha.
Isicatshulwa seTi eluhlaza - Inceda ukonyusa imetabolism kunye neehormoni ezinceda ekudilizeni iiseli ezinamanqatha.
Iinkozo zeParadesi -Amayeza e-thermogenic atshisa amafutha, alawula amanqanaba aqinisekileyo egazi, kwaye atshise amanqatha esisu.
IGlucomannan -Ukuncitshiswa komnqweno wokutya okwenza ukuba uzive ugcwele ixesha elide, ukunciphisa ukuthanda kwakho kunye nokutya ikhalori.
Umthamo ocetyiswayo weTrimTone yipilisi enye kusasa nganye ngamanzi ngaphambi kwesidlo sakusasa. Le nkqubo yeedosi ilunge ngakumbi kunezinye izongezo ezifuna ukuba uthathe amaxesha ama-3-4 ngosuku. Kuba inedosi encinci ye-caffeine, inokusetyenziswa njengesongezelelo sangaphambi kokuzilolonga.
Ingaba ukhangele ukugcinwa kwesisindo sexesha elide okanye uncedo lokunciphisa ubunzima ukukunceda ufezekise umzimba wakho ongcono, i-TrimTone yenye yezona ndlela zikhethileyo kwimarike. Ukuba awanelisekanga ziziphumo zakho ezivela kwiTrimTone, ungayibuyisela kwisithuba seentsuku ezili-100 ukuze ubuyiselwe imibuzo engabuyiswanga-mibuzo.
Ezi pilisi zokulahleka kobunzima zisetyenziselwa kakuhle abasetyhini abafuna isitshisi sendalo esisebenza ngokukhawuleza. Abasetyhini abaphila ubomi obusebenzayo bayakuxabisa amandla ongezelelweyo kunye nokugxilwa okubonelelwa yiTrimTone.
Yenziwe eUnited States
Iziphumo ezikhawulezayo zibonwe kwiiveki nje
I-100% yezithako zendalo, asimahla kwiziphumo ebezingalindelekanga
Isitshisi esisebenzayo sokuSebenza kunye nokuThintela ukutya
Isiqinisekiso sokuBuya kweMali se-100
Cofa apha ukuze ufumane amaxabiso asezantsi kwiTrimTone
I-6) I-PrimeShred: UkuXhaswa kokutya okumgangatho ophezulu
Inkulumbuso sisongezo esivuthayo esithembisa ukunceda amadoda aqhekeze amanqatha kwaye atyebe ngaphandle kokuphulukana nobunzima bemisipha. I-PrimeShred kick iqala imetabolism yakho kwaye inceda umzimba wakho ukuguqula amanqatha anenkani abe ngamandla asebenzisekayo, okwenza ukuba kube lukhetho oluthandwayo phakathi kwabakhi bomzimba kunye namajoni omthambo.
Nantsi indlela iPrimeShred enokukunceda ngayo:
Iyakhawulezisa inkqubo yokutsha kwamafutha emzimbeni wakho
I-PrimeShred isebenzisa izithako zendalo ze-thermogenic ukonyusa izinga lokucolwa komzimba, okukhokelela ekwehliseni ubunzima bomzimba ngokukhawuleza kunokutya nokuzilolonga kuphela. I-Thermogenesis inceda umzimba wakho utshise iikhalori ezininzi (nokuba uphumla) kwaye uguqula amanqatha abe ngumthombo wamafutha, ekuvumela ukuba usebenze kuwo nawuphi na umthambo.
Yenza kusebenze iihormoni ezitshisa amanqatha
I-PrimeShred inceda ukubangela iihormoni ezitshisa amanqatha emzimbeni ezinceda ekunciphiseni amanqatha aneenkani, ngakumbi embindini. Isiphumo somzimba onqabileyo kunye nokuguqulwa komzimba opheleleyo.
Yandisa amandla akho kunye nokugxila
Ukutya okuqhelekileyo kunye neendlela zokuzilolonga zinokushiya uphelelwe ngamandla kunye nokudinwa engqondweni. I-PrimeShred ikunceda ukuba ulwe nokudinwa ngokwandisa amanqanaba amandla nge-nootropics yokunyusa ingqondo. I-PrimeShred iyakunceda ekupheliseni inkungu yengqondo kwaye ikugcine uzive ubukhali kwaye ujonge.
I-PrimeShred iye yenziwa ngokwenzululwazi emva kweminyaka yophando olupheleleyo. Le pilisi yokulahleka kobunzima isebenzisa izithako ezivavanywe eklinikhi kunye needosi ezifanelekileyo zezona ziphumo zingcono. Ngokungafaniyo nezinye iipilisi zokulahleka kobunzima ezifihla idosi yazo ngokudibanisa ubunini, iPrimeShred ityhila ngokupheleleyo zonke izithako kunye nedosi echanekileyo yokubonisa ngokucacileyo. Esi songezelelo sokulahleka kobunzima asiyiyo i-GMO, i-gluten-free, asimahla kulondolozo, kwaye yenziwa e-United States.
Nalu uluhlu olupheleleyo lwezithako ngaphakathi kwe-PrimeShred:
Imbotyi yekofu eluhlaza
I-Vitamin B Complex
Rhodiola Rosea Ingcambu
I-PrimeShred iza nomgaqo-nkqubo okhokelayo wokubuyisela imali kwi-100. Oko kuthetha ukuba ukuba awutshabalaliswanga ngokupheleleyo ziziphumo zakho zokulahleka kobunzima, unokuyibuyisela ngokulula kwimibuzo engenakubuzwa ebuyiswayo.
I-PrimeShred ikwanazo nezaphulelo ezimangalisayo ukuba uthenga ngaphezu kwebhotile enye. Umzekelo, ukuba uthenga ubonelelo lweenyanga ezi-4, uza kufumana iibhotile zasimahla ezi-2. Banokuthumela simahla kwiiphakheji ezininzi. Ngokufana nezinye iipilisi zokutya kwintengiso, zikhona ii-servings ezingama-30 kwibhotile.
Nangona nabani na enokuxhamla kwi-PrimeShred, kungcono kumadoda afuna ukutyeba kwaye agcine izihlunu ngelixa atya. Nokuba ujonge ukunciphisa umzimba ngomjikelo wokusika okanye ufuna nje ukuhla ngexesha lehlobo, iPrimeShred yenye yeepilisi zokulahleka kobunzima emadodeni.
Nciphisa ubunzima kwaye uhluthe ngaphandle kokulahlekelwa ubunzima bomzimba
Ukunyusa amanqanaba emetabolism kunye nenqanaba lokunciphisa umzimba ngokukhawuleza
Ukuqhubela phambili, ifomula ephezulu yokulahleka kobunzima
Imifuno kunye ne-vegan-friendly
Umgaqo-nkqubo okhokelayo wokubuyisa iintsuku ezili-100
Cofa apha ukuze ufumane amaxabiso aphantsi kwi-PrimeShred
# 7 KetoCharge: Eyona pilisi yeKeto yokutya iQinisekisiwe ukuba iya kusebenza
KetoCharge yipilisi esebenzayo yokulahleka kobunzima eyilelwe ngokukodwa ukutya kwe ketogenic. Ukufikelela kwimeko ye-ketosis kuvumela umzimba wakho ukuba utshintshe ukusuka ekutshiseni i-carbs njengomthombo wamandla ukuya kutshisa iivenkile ezityebileyo endaweni yoko. Nangona kunjalo, ukuphelisa iikhabho ekudleni kwakho akulula. I-KetoCharge yenza kube lula ukungena kwimeko ye-ketosis, ivumela umzimba wakho ukuba utshise amanqatha endaweni ye-carbs yamandla.
I-KetoCharge isebenza ngokunyusa imveliso yemvelo yomzimba weetoni. Le nkqubo ikuvumela ukuba uqalise ukusebenzisa amafutha kumhla wokuqala, kunokuba ulinde iiveki ukuba umzimba wakho ungene kwi-ketosis. I-KetoCharge ikwanceda ukulinganisela ii-electrolyte zegazi ukuze ukwazi ukutsiba iimpawu zomkhuhlane we keto eziqhelekileyo kwisidlo se keto.
I-KetoCharge ifomula iqulethe i-ketone engokwemvelo exhasa amandla endalo, i-ketosis kunye ne-metabolism. Ngokokuphononongwa, uninzi lwabasebenzisi lubanga ukuncitshiswa kweminqweno, ukulahleka kwesisindo ngokukhawuleza, kunye namandla anyukayo kwesi songezelelo sokunciphisa umzimba.
I-KetoCharge ibonelela ngesiqinisekiso sokwaneliseka se-100%, ukuhanjiswa simahla, kunye nokonga okukhulu xa uthenga ngaphezulu kwebhotile enye. Ibhotile nganye iqulethe njengezingxobo 60, nto leyo eyaneleyo ukuba ihlale iintsuku ezingama-30.
Ngokubanzi, i-KetoCharge yipilisi yokulahleka kwesisindo esihle kakhulu kuye nabani na ofuna ukukhawulezisa iziphumo zabo kukutya kwe ketogenic.
# 1 ilinganise ipilisi yeketo kwintengiso
Guqula amanqatha agciniweyo abe ngumthombo wamandla
Ukuthenjwa ngamawaka wabathengi abavela kwihlabathi liphela
I-100% yeetoni zangaphandle zendalo ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga ezichaziweyo
Cofa apha ukuze ufumane amaxabiso aphantsi kwiKetoCharge
Yintoni ekufuneka uyijongile kwezona Zixhobo ziLungileyo zokuNciphisa
Xa kuziwa kwiipilisi zokwehla kobunzima, kubalulekile ukuba ujonge iimveliso eziqulathe i-100% yezithako zendalo. Ezona zixhobo zilungileyo zokuphulukana nobunzima kufuneka ziqulathe izicatshulwa zezityalo, iivithamini, kunye nezinto zemvelo zokunciphisa umzimba ezikhuselekileyo kwiziphumo ebezingalindelekanga.
Izithako ngaphakathi kwipilisi yokulahleka kwesisindo kufuneka ziphandwe kakuhle kwaye zixhaswe zizifundo zeklinikhi ukubonisa ukusebenza kwazo.
Iipilisi ezininzi zokulahleka kwesisindo kwintengiso zisebenzisa iifomula zobunini ezifihla idosi yesithako ngasinye kwifomula yazo. Qiniseka ukuba uyayiphepha imveliso esebenzisa imixube yokuthengisa kunye nokukhetha izongezo ezinikezela nge-100% elubala endaweni yoko.
Ngalo lonke ixesha jonga uphononongo lwabathengi ngaphambi kokuthenga nayiphi na ipilisi ukuze unciphise umzimba. Abanye abasebenzisi banokunika ulwazi oluxabisekileyo kwiingenelo kunye neengozi kwaye bakulumkise ngemiphumo emibi. Ngelixa uphononongo lweepilisi zokunciphisa umzimba akufuneki zenze okanye zaphule ukuthenga kwakho, zinokuhamba indlela ende ekubumbeni uluvo lwakho malunga neziyobisi ezithile zokunciphisa umzimba.
Xa kuziwa kwiipilisi zokwehla kobunzima kunye nezongezo zokutya, kubalulekile ukuba uqonde ukuba uLawulo lwezoKutya kunye neDrug (FDA) alulawuli iingxelo ezenziwa ngabavelisi kwiibhotile. Qinisekisa ukuba uyaziqonda izithako ngaphakathi kwayo nayiphi na ipilisi yokulahleka kobunzima oyithathayo, ngakumbi naziphi na izinto ezinje ngecaffeine. Abavelisi bezongezo zokutya bahlala bebandakanya icaffeine, njengoko inceda i-thermogenesis ngaphakathi komzimba. Ukuba unovakalelo kwi-caffeine, unokufuna ukuqaphela isisombululo sokulahleka kwesisindo esingenakho ukuvuselela.
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe xa kuthengwa iipilisi zokulahleka kwesisindo okuqinisekileyo lixabiso. Ixabiso lesongezelelo lihlala libonisa umgangatho wezithako ngaphakathi.
Ixabiso lepilisi yokulahleka kobunzima liya kuxhomekeka kumgangatho wezithako, inani leenkonzo ngebhotile nganye, kunye nomthamo wesithako ngasinye.
Ukuba ujonge into enkulu, jonga iimveliso zokunciphisa umzimba ezinikezela ngezaphulelo xa uthenga ngaphezulu kwebhotile ye-1. Abavelisi abaninzi banikezela ngeebhotile zasimahla kunye nokonga xa bethenga i-2, 4, okanye iinyanga ezi-6 zonikezelo.
Iindidi zeziXhobo zokuThoba umzimba
Izitshisi zeThermogenic Fat
Amanqatha e-Thermogenic burners aqukethe zonke izinto zendalo eziyilelwe ukukhulisa imetabolism yakho kunye nokwenza inkqubo yokutsha kwamafutha emzimbeni wakho. Ezinye izitshisi ezinamanqatha ziqulathe isithako esinye, ngelixa ezinye izongezo zinemixube emininzi yokunyusa umzimba. Imizekelo yezithako ezifumaneka kwizongezo ze-thermogenic zibandakanya i-caffeine, i-CLA, iirasibheri ketoni, iti eluhlaza, icapsaicin, kunye negarcinia cambogia.
Iibhlokhi zeCarb ziluhlobo lokongezwa kokutya okusebenza kancinci okwahlukileyo kuninzi lweepilisi zokunciphisa umzimba kwintengiso. Zithintela iicarbs ekubeni zetyiswe ukutya okutyayo, zikuvumela ukuba utye ukutya okunesitatshi ngaphandle kweekhalori ezingafunekiyo. Iibhlokhi zeCarb zisebenza ngokuthintela ii-enzymes emzimbeni wakho ezinoxanduva lokwetyisa iintlobo ezithile zeecarbohydrate. IiCarb blockers zihlala zithengiswa njengeepilisi ezilungileyo zokunciphisa umzimba, kodwa kukho ukunqongophala kwezifundo ezaziwayo ezibonisa ukusebenza kwazo.
Umnqweno wokuNqanda ukutya
Ukutya okucinezelayo kunceda abantu bazive begcwele xa bengekho. Kukhetho olunokubakho lokwehla kobunzima ukuba uzifumanisa uqhubeka utya kakhulu ngenxa yokuba uziva ungenanto. Ezinye zezona zinto zidume ngokucinezelwa ngumnqweno wokutya zibandakanya i-glucomannan, isicatshulwa seti eluhlaza, igarcinia cambogia, kunye ne-linoleic acid edibeneyo.
I-caffeine ngokuqinisekileyo sesona sithako sixhaphakileyo kwiminqweno yokutya. Isebenza ngokuchaphazela imveliso yemizimba yakho. Le hormone ivuselela umdla wakho wokutya kwaye uxelele ingqondo yakho ukuba inyuse ukutya. ICaffeine iyazirhuqa ezi miqondiso ukuze ukwazi ukulawula indlala kunye nempilo yakho.
Izithako eziphezulu ezifumaneka kwiipilisi zokutya ezisebenzayo
Glucomannan yifayibha yendalo yokutya evela kwingcambu ye-konjac, ekwabizwa ngokuba yindlovu yam. Isithako esihluthayo sithatha amanzi kwaye senze ifayibha eshinyeneyo esiswini. Ukutya okucinezelayo kuye kwafumana isiteketiso umtshayelo wamathumbu.
Isicatshulwa seti eluhlaza sinemixube emininzi eluncedo, kubandakanya i-antioxidants kunye ne-caffeine. Inceda abantu ukuba banyuse amanqanaba abo emandla kunye nenqanaba lokunciphisa umzimba, okwenza kube lula ukwenza imithambo yemihla ngemihla kunye nokutshisa iikhalori. Isongezelelo sinyathela phantsi ukutya ukuze ungabinakho ukujongana nenimba yendlala.
Isicatshulwa seGreen Green Bean
Isicatshulwa sembotyi yekofu eluhlaza sivela kwiimbotyi zekofu ezingavunywanga. Isongezelelo esidumileyo sibonelela ngezibonelelo ezininzi zempilo, kubandakanya ukuphucula i-cholesterol kunye noxinzelelo lwegazi. Abaphandi bakholelwa ukuba uxinzelelo oluphezulu lwee-asidi ze-chlorogenic sesona sizathu siphambili sokunceda abantu ukuba basike ubunzima.
I-Garcinia cambogia ivela kwi-Malabar tamarind, isiqhamo esitshatyalaliswayo esivela e-Indonesia. Oososayensi bathi isicatshulwa sinokunceda abantu ukulawula indlala yabo kunye namazinga aswekile egazi. Eyona nto iphambili kuyo yihydroxycitric acid, ekhuthaza umzimba ukuba usebenzise amafutha agciniweyo ukwenza amandla.
Ukudibana neLinoleic Acid
Iconjugated linolenic acid (CLA) ivela kwizilwanyana ezitya ingca, ezinje ngexhama neebhokhwe. Ngelixa i-CLA ineentlobo ezininzi, i-C9 t11 yeyona inokwenzeka ukuba uyifumane kwiimveliso zakho zokulahleka kobunzima. Izifundo zinxibelelanisa i-CLA nokutshiswa kwamafutha aphezulu kunye nokulahleka kobunzima.
I-raspberry ketone yimolekyuli yendalo efumaneka kumaqunube amnyama, iicranberry kunye nezinye iziqhamo. I-raspberry ketone ifumene ingqalelo yakutshanje ngeepropathi zayo zokulahleka kobunzima. Oososayensi bafumanise ukuba imolekyuli inceda iimpuku zonyuse ukonakala kwamafutha, zilawule imetabolism, kunye nokulawula amanqanaba eswekile yegazi.
IForskolin ivela kwisityalo saseIndiya iColeus, esikhula ikakhulu eIndiya, eNepal naseThailand. Uphando lubonisa ukuba inokunceda ukunyanga i-glaucoma, ukutyeba kakhulu, kunye neemeko zentliziyo. Isifundo esincinci safumanisa ukuba amadoda athathe i-250mg ye-forskolin iinyanga ezintathu alahlekelwe ngumzimba ngaphezulu kunamadoda kwiqela le-placebo.
Amayeza amayeza okuLawulwa kobunzima bokuThathela ingqalelo
I-Orlistat (Alli) yindlela ye-OTC eya kwiXenical. Ipilisi ye-60mg ilungele abantu abadala abane-BMIs ngaphezulu kwe-25 abacwangcisa ukwamkela ukutya okunamafutha asezantsi kunye neekhalori ezisezantsi. I-Orlistat inciphisa inani labantu abanamafutha abanokulithatha emva kokutya.
I-enzyme lipase iphula amanqatha xa ifika kumathumbu akho. I-Orlistat ibhloko ye-lipase, ngoko umzimba awukwazi ukugcina amanqatha kumandla exesha elizayo. I-Orlistat ikwathintela umzimba wakho ekuthatheni iivithamini ezinyibilikayo A, D, E, kunye noK.
Thatha amayeza okunciphisa ilahleko evunyiweyo yi-FDA ukuya kuthi ga kathathu ngemini ngeziphumo ezifanelekileyo. Ugqirha unokucebisa ukusebenzisa i-Orlistat 30 ukuya kwimizuzu ye-60 ngaphambi kwesidlo sakho esilandelayo. Iziphumo ebezingalindelekanga zinokubandakanya izitulo ezithambileyo kunye nobushushu.
Ukuchasana liyeza lokunciphisa ubunzima beziyobisi kwiCurrax Pharmaceuticals. Ipilisi inokuphelisa indlala kunye nokulawula iminqweno, enkosi kumxube wamayeza amabini, i-naltrexone kunye ne-bupropion. INaltrexone sisiyobisi esamkelwe ngugqirha sokunyanga utywala kunye neziyobisi ze-opioid, ngelixa i-bupropion inceda ngoxinzelelo.
ICurrax Pharmaceuticals igqibe uvavanyo lwezifundo zexesha elide ezide. Ulingo olunye lonyaka lufumene ukuba i-46% yezifundo ilahlekile ubuncinci i-5% yomzimba wabo xa kuthelekiswa ne-23% yeqela le-placebo. Iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho zibandakanya ukuba nesiyezi, isicaphucaphu, kunye nokuqhina.
Phentermine isebenza njenge amphetamine. Ikhompawundi iguqula inkqubo ye-nervous system yakho, inyusa izinga lokubetha kwentliziyo yakho ngelixa unciphisa umdla wakho wokutya. I-Phentermine sisiyobisi esiqhelekileyo sokulahleka kwesisindo kubantu abanesifo seswekile kunye ne-cholesterol ephezulu.
Iyeza eliqinisekisa ubuchopho bakho ukuba bukhuphe ii-neurotransmitters ezingakumbi. Ezi hormone zilawula imetabolism yakho kunye nokutya kwaye zikukhohlise ekusebenziseni ngakumbi kwaye utye kancinci. Iziphumo ebezingalindelekanga zinokubandakanya ukuba nesiyezi, iintlungu zesifuba, iintloko ezibuhlungu kunye nokuphefumla.
UBelviq unika abantu amandla okulawula ukutya kwabo. Iyeza lichaphazela imiqondiso ye-neurotransmitters kwingqondo, ngoko ke uziva ugcwele kwanasemva kokutya isidlo esincinci. I-Belviq sisixhobo esisebenzayo sokunyanga ukutyeba kakhulu kwabantu bayo yonke iminyaka kunye neemeko zempilo.
Ngelixa iBelviq inokwenza umahluko obonakalayo esinqeni sakho, ayinakunyanga imiba esembindini. Olu nyango lokutyeba kakhulu alunakunyanga isifo seswekile, i-cholesterol ephezulu, okanye isifo sentliziyo. Ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho zibandakanya umqala obuhlungu, ukubetha kwentliziyo ngokungaqhelekanga, isicaphucaphu, kunye nokubanjwa.
I-Xenical yinguqulelo ka-Alli (Orlistat.) Zombini iziyobisi zisebenzisa i-Orlistat ukunqanda umzimba ekufunxeni amanqatha okutya ukuya kuthi ga kwi-30%. Umahluko kukuba iXenical ngamandla kagqirha.
Ukuba ufuna ukufumana uninzi lweXenical, yisebenzise ngelixa usitya. Uphando lubonisa ukuba indibaniselwano ingathoba ubunzima bomzimba bonyuke nge-10%. Isifundo esivela kwiKholeji yaseBaylor yezoNyango senze uvavanyo lweeveki ezingama-54 kwaye safumanisa ukuba i-57% yabathathi-nxaxheba balahlekelwe ngaphezulu kwe-5% yobunzima babo xa kuthelekiswa ne-34% kwiqela le-placebo.
Thatha iXenical kathathu ngemini ngaphambi kokutya. Amayeza okuphulukana nobunzima aphelisa amafutha angacaciswanga ngaphakathi kwentsuku ezimbini okanye ezimbini zokusetyenziswa. Iziphumo ziquka izitulo ezithambileyo, iintlungu zesisu, kunye namanqanaba asezantsi e-vitamin D.
Ungasifumana njani esona siphumo sineepilisi zokunciphisa umzimba
Ngaphambi kokuthenga nasiphi na isongezelelo sokunciphisa umzimba, kubalulekile ukuba ube nendlela yokuphila esempilweni endaweni. Iipilisi zolusu azizizo izongezo zomlingo ezinokukunceda ukunciphisa umzimba ngaphandle komzamo. Uya kufezekisa iziphumo ezilungileyo kunye nohambo lwakho lokunciphisa umzimba ukuba udibanisa iipilisi zokutya kunye nokutya okunempilo kunye nerejimeni yomthambo.
Ukufumana ilahleko zokunciphisa umzimba eziqulethe izinto ezikhuthazayo ezifana ne-caffeine, kuya kufuneka uzithathe kwakusasa ukuthintela nakuphi na ukuphazamiseka kokulala. Abanye abantu bakhetha ukuthatha iipilisi zokwehla kobunzima ngaphambi kokuzilolonga ukubonelela ngamandla ongezelelweyo.
Kwakhona kubalulekile ukuba uqaphele ukuba izongezo zokulahleka kwesisindo azikho izisombululo ezikhawulezayo. Kufuneka uqiniseke ukuba unika ipilisi yokulahleka kobunzima ixesha elaneleyo lokusebenza ngaphambi kokuba ulinganise ukusebenza kwayo. Sincoma ukuthatha iipilisi zokunciphisa umzimba kangangeentsuku ezingama-60 ukuya kwezingama-90 kwezona ziphumo zibalaseleyo.
Ndingakhawuleza Njani Ukuphulukana nobunzima Namayeza ePilisi?
Ukukhawuleza ukunciphisa umzimba kunye neepilisi zokutya kuya kuxhomekeka kwizinto ezininzi kubandakanya ubunzima bakho, ubunzima bakho bekhalori, kunye nokuzilolonga. Uninzi lwabantu luqala ukunika ingxelo yokulahleka kwesisindo ngaphakathi kweeveki ezi-2-4 zokusetyenziswa, ngelixa abanye bebona iziphumo zokulahleka kwamafutha ezibonakalayo ngaphakathi kweeveki ezi-4-6. Ukuba awuphulukani nobunzima phakathi kweentsuku ezingama-60 zokuqala, sicebisa ukubuyisa iipilisi zokulahleka kwesisindo sokubuyiselwa imali ukuba umenzi unesiqinisekiso sokubuyisa imali esisasebenza.
Ngaba Ungazithenga Iipilisi Zokunciphisa Umzimba Phezu Kwokubala?
Ewe, kukho iipilisi ezahlukeneyo zokulahleka kwesisindo onokuzithenga ngaphaya kwekhawuntari ngaphakathi kwiivenkile zalapha njengeGNC okanye iVitamin Shoppe. Nangona kunjalo, ezi pilisi zelahleko zobunzima zihlala zineedosi ezisezantsi kakhulu ukuze zibe nefuthe elihle ekunciphiseni ubunzima. Iipilisi zokutya ziveliswa ngexabiso eliphantsi ukuze zithengiselwe abantu. Ezona zixhobo zokulahleka kwesisindo zifumaneka kwi-Intanethi kwaye zihlala zifika ngexabiso eliphezulu. Nangona kunjalo, njengoko besesitshilo ngaphambili, ixabiso leepilisi zokutya zihlala zibonisa umgangatho wazo. Ngamanye amagama, ufumana oko ukuhlawulayo xa kuziwa kwiipilisi zokutya ezisebenzayo.
Ngaba ukuPhulukana noMzimba kuVunywa yi-FDA?
Uninzi lweepilisi zokulahleka kobunzima be-counter-counter ziwela kwelinye leendidi ezimbini: izongezo zokutya kunye amayeza non-kagqirha. I-FDA yongamela kuphela amayeza okunciphisa ilahleko, njenge-Orlistat. Abavelisi kufuneka babonise kwi-FDA ukuba imveliso ikhuselekile kwaye iyasebenza ekusetyenzisweni kwabantu ixesha elide.
Izongezo zokutya zinendlela ethe kratya malunga namabango. Ngelixa kufuneka benze iingxelo ezinyanisekileyo, i-FDA ayivavanyi okanye ayamkeli ukuthengisa. Ukuba i-FDA inokungqina ukuba iyeza lokunciphisa umzimba alikhuselekanga, inokucela umenzi ukuba ayisuse ezishelifini.
Iingcinga zokugqibela-Ngaba iipilisi zokunciphisa umzimba zikulungele?
Ukuba ukutya okunempilo kunye nokuzilolonga akwanele, izongezo zokwehla kobunzima bendalo zibonelela ngendlela eluncedo yokufezekisa iinjongo zakho zomzimba. Ezi pilisi zikhuselekileyo nezisebenzayo zokulahleka kobunzima zibonelela ngeqhuma olifunayo ukuze uchithe iiponti ezinobunzima. I-brand nganye isebenzisa ifomula eyahlukileyo eyahlukileyo yokwandisa ukunciphisa umzimba, nokuba ufuna ukunciphisa ukutya kwakho, ukunciphisa ukufunxwa, okanye ukutshisa amanqatha amaninzi.
Ngelixa sicebisa ukuba usebenzise ipilisi yokulahleka kwesisindo, thetha nogqirha wakho malunga neemveliso zelahleko kuqala. Oogqirha banokuvavanya impilo yakho, banike iingcebiso zonyango, kwaye bakwazise ukuba ngaba iipilisi zokutya ezithile zinemiphumela emibi na. Ugqirha unokukunika amayeza amayeza okunciphisa ubunzima bomzimba, njengo-Alli (Orlistat) kunye noBelviq, endaweni yeentlobo zeekhawuntari.
Nazi iiMovie kunye neMidlalo yeTV ebetha i-IMDb TV yasimahla ngo-Agasti
Inguqu: I-Laverne Cox's Rising Star isuka 'kwiDiddy' ukuya kwi 'Orenji nguMnyama oMtsha'
I-EP ye-'Superhuman 'kwiTalente kuMboniso oPheleleyo kuLuhlu lweNqaku eliNgekhoyo
le ntombazana kungs & umpheki 'kwii-3 zokutshisa
Iipodcast ezifanayo kwiiteyiphu ezimnyama
Iipilisi zokulahleka kobunzima ezingqinisisiweyo
ubonakala njani ukumkanikazi uElizabeth
ixesha lokuthandana 2 uphinda ubuye
ilizwe lasekhaya ixesha le-6 quinn kunye nocarrie
phinda ukhangele iziphumo simahla